Kubatsira kutora mazita eStv TV? Pakutanga kuona, mazita eScreen TVs anongotya kuwanda kwemashoko uye nhamba, zvinoratidzika, mune zvisiri izvo. Zvechokwadi, unogona kuverenga tsamba shomanana, ...
Nzira yekuongorora chekombiyiti yekicheni yekakani yekururama kumba? Pharmacies ane zviyero zvakakwana nezviremba, zvakasikwa. vauye uye ukumbire zviyero kwemaminitsi mashomanana, zviyero pamwe newe kuti uve, ...
phase shift? Chii chinoshandiswa chechikamu? zvikonzero zvekuchinja? nokuda kwechikonzero chakareruka: zvikonzero zvekuchinja ndezvekuvapo kwezvinhu zvinoshandiswa pakuita zvinhu mumutambo, sezvo vachida kuunganidza uye kusunungura magetsi kana ...
Ndeupi mutemo webasa reSchauberger vortex injini? Mukusikwa kwechirwere chemafomu chaiwo, iri bhagel, iyo inofamba panguva imwechete pakati pepakati uye mukati memharaunda yakakura ye bagel pachayo. Asi ...
Zvinokuvadza kuvhara foni nekubhadhara nemari huru here? Zvinokuvadza, zvinogona kupisa kuratidzwa (kwete pakarepo asi zvishoma nezvishoma). Muzvizhinji, zvinouya kune zvakadai zvokuti hapana chinenge chichange chichioneka pachitarisiko, zvose ...
Maitiro ekuyera inductance yeiyo coil Freebie haizoshande. Chiyero chekuyera hachisi chinhu chakareruka, uye haugone kuchikonzera neDC multimeter iri yega. Nzira dzinoverengeka dzinogoneka. Kutanga zvinhu kutanga, inductance ...
Ikozvino dhidhiyo yeCDF-77 inoshanda muMoscow? Mutori we DCF77 uri mu Mainflingen, Germany (25 km kumaodzanyemba kwakadziva kumaodzanyemba kweFrankfurt am Main) uye inoshanda pane imwe nguva ye77,5 kHz ne ...
Chii ichi chi chip ??? chii chinonzi ???? HEF4094BP http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17726/PHILIPS/HEF4069UBP.html link yakadziviswa nehutungamiri hweprojekti pamwe nekunyorera mazano, ...
Ndiani anoziva nzira yekurongedza tangi pane yekare maFILIP TV, apo pasina chinhu chakadai chiri kure kudzora nemamenyu eTV. Zvese zviripo pane menyu, asi "chiteshi kuvheneka" - saka hazvisi ...
Nzira yekuziva sei iyo mileage kamera ine? Nikon D3100 Mileage pane kamera haisi iyo yakaipa! Ndakaona IZVI uye mapindisiro anoita vana bvunzo kuchikoro, uye ...
Nditaurire ndapota sei mafuta epombi inodhonza sei? Vake veAmerica vanodanawo kuti mbongoro musoro inodedera mumatsime pachayo, kune chimwe chinhu chakafanana nepistoni umo mune chevhavhavha yekuongorora kana inotanga ...
Ndiri kutsvaga bhuku rakadai se "electrics for dummies"
Ndiri kutsvaga bhuku rakadai se "maEmodhetheni kumadrum" Pane yemahara magazini paInternet "Ini ndiri wemagetsi" !!! Rudolf Svoren "Electronics danho nedanho." 1986 yegore. Haana kutanga nekuyaruka. Yakawanda yeiri bhuku ...
Ndeapi mabasa e AF uye TA? Ndezvipi zvinoshanda paredhiyo: AF uye TA? chii chavari kuita? AF. Rwendo rwekufambisa kwakasiyana-siyana Nyaya yemafungiro akasiyana anowanikwa pachiratidziro ...
Ndezvipi zviri nani: rosin, mafuta akatengeswa kana asidi? Ndinoshandisa orthophosphoric Bvunza zvakajeka. Chii chauchazogadzirisa? Smile, havazodzidzisi zvakaipa pano. Kana tini isingadi kubatisisa kumatare, itai nayo neasiti. Uye ...
Mangani megabits, mune imwe megabyte .... need exactly ..
How many megabytes, mune imwe megabyte .... Izvo zvinodiwa ..
Chii chinonzi rotor? Chii chinonzi stator? By wander pliz ROTO-kufamba, kutenderera. Stator - statics, rugare, hapana chinofamba. Mune michina yemagetsi, ese ari maviri anogona kuve nemhepo. Wikipedia DC mota. ...
Maitiro ekuita ultraviolet uye infrared mwenje kumba? DRL Putira raganda uye wopwanya iyo yekumwenje yekumwenje (CAUTION MERCURY!) Mukati memwenje iri "quartz burner", inopa radiarraoleole. Batanidza uchishandisa ...
Mibvunzo ye85 mu database yakagadzirwa mu 2,871 masekondi.